Kismaayo News » Madaxweyne Xasan oo Nairobi tagaya Arbacada
Madaxweyne Xasan oo Nairobi tagaya Arbacada
Kn:Wararka aan ka helayno ilo wareedyo u dhuun duleela xafiiska madaxweynaha ayaa KismaayoNews u xaqiijiyay in Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud uu Nairobi ku waajahanyahay laba iyo tobanka bishan oo ku beegan maalinta Arbacada.
Madaxweynaha waxaa socdaalka ku wehelin doona xubno kamid ah golaha wasiirada iyo xildhibaano laga yaabo inay ka qayb qaadan karaan u kala dabqaadka madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Kenya oo xaaladoodu ay ahayd Allow sahal.
Socdaalka Madaxweynaha oo mudaba la hadal hayay ayaa ujeedka ugu mihiimsan uu yahay sidii mawqif midaysan ay labada hogaamiye uga gaari lahaayeen arimaha Jubbooyinka oo madmadow ka dhex abuuray labada dhinac.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud ayaa dhankiisa u arka inayna munaasab ahayn in Jubbooyinka iyo Gedo laga sameeyo maamul ayna dawladda dhexe xakamayn karin sida Puntland iyo waliba Somaliland oo ayadu labaatan kii sano ee u danbaysay la soo taagnayd, Koonfur waan kala baxnay. Hadii ay ka fursanweydo in maamul la sameeyana ay markaasi dawladda dhexe iska leedahay sharciyadda maamul dhisidda. Taasi waxay keentay in Madaxweyne Xasan uu lugta ku marto geed kasta oo suuro galin kara inaysan arintaasi dhicin, waxaase taa garab ordayay qolyo kale oo damacyo guracan leh oo ayaguna beesha caalamka ku wareeriyay waraaqo dacwado ah oo Kenya ku tiimbaraynaaya inay beel gooni ah wax la doonayso.
Dhinaca Kenya ayaa ayadu isu arkaysa in Soomaalidu ka abaal dhacday wanaag badan oo ay u gashay. Waxay aaminsantahay inaan dawladda Soomaaliya ee Villa Soomaaliya dhex fadhida daacad ka ahayn in Shabaab laga xoreeyo dalka, taasina waxay daliil uga dhiganayaan, xagxagashada ay kala kulmeen markii ay dalka Galeen iyo markii ay Kismaayo la wareegeen, halkii looga mahadcelin lahaa.
Isku soo duub oo, madaxweyneyaasha kala irdhaysan ayaa la filayaa inay isku soo dhawaadaan, maadaama ay isaga xiranyihiin arimo badan.